Ụbụrụ: kedu ihe ọ bụ | Ozi ECommerce
O nwere ike ịbụ na ị nụbeghị banyere ụbụrụ ụbụrụ mbụ, ma ọ bụ mara ihe ọ bụ. Otú ọ dị, ọ bụ otu n'ime ikpo okwu na-eme nke ọma n'ụwa nile, karịsịa n'ihi na anyị na-ekwu maka ngwá ọrụ iji kwado ọdịnaya ma nweta clicks na nkọwa.
Ma, Kedu ihe bụ Outbrain? Kedu ihe ọ bụ? Nwere ike ịbụ ụdị atụmatụ ọdịnaya iji nwetakwuo ndị na-agụ akwụkwọ. Anyị na-akọwara gị ihe niile.
1 Gịnị bụ Outbrain
2 Ihe mere ị ga-eji jiri Outbrain
3 Otu esi eji Outbrain
4 Otu esi eme nke ọma n'elu ikpo okwu
Gịnị bụ Outbrain
Ụbụrụ na-akọwa onwe ya dị ka a ikpo okwu nkwanye nke ị nwere ọnụ ọgụgụ nke ị ga-esi nweta nsonaazụ gbasara clicks na ọnụ ọgụgụ ndụmọdụ na ha enyela gị maka ọdịnaya ahụ ị kesara.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, anyị na-ekwu maka ngwá ọrụ nke ị nwere ike ịkwado ọdịnaya gị ma nye gị ohere ịbawanye ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ na-abịa na ibe gị, na-emepụta uru dị ukwuu karị (ị ga-enwekwu okporo ụzọ na ọtụtụ ndị na-ege ntị iji lekwasị anya).
Ugbu a na-arụ ọrụ na mgbasa ozi nchịkọta akụkọ dị oke mkpa gburugburu ụwa dị ka akụkọ Sky, CNN, Fox News, Hears ... Na, ọ bụ ezie na emeghebeghị ya na Spain, nke bụ eziokwu bụ na nke a apụtaghị na a pụghị iji ya nwetakwuo okporo ụzọ.
Ihe mere ị ga-eji jiri Outbrain
E nwere ọtụtụ ndị nwere ike ịla azụ iji ụdị ngwá ọrụ ndị a n'ihi na a maghị ya n'ezie ruo ókè ọ nwere ike imerụ ma ọ bụ rite uru SEO na nhazi nke ibe.
Dị ka a Ọmụmụ Moz, Outbrain ikpo okwu Ọ bụ nke na-ebute ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke nlele ibe n'otu onye ọrụ, yana ọnụego bounce dị ala. Ya bụ, ị nwere ike nweta nsonaazụ ka mma karịa ibe ndị ọzọ.
Otu n'ime njirimara nke ọ pụtara bụ n'ihi na ha na-eche nke ukwuu maka ịnye ọdịnaya dị mma na uru, ọ bụrụhaala na ọ na-enye ihe ọmụma ma ọ bụ na-atọ ụtọ. Ọ bụrụ na ezipụ ụdị akụkọ ndị a, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na a na-anabata ha, ọ bụghị naanị nke ahụ, mana ha nwekwara ike ịmepụta 40% ntinye aka karịa mgbasa ozi ma ọ bụ mgbasa ozi, gụnyere ogologo oge nnọkọ (ihe ruru ugboro atọ).
Na nke a ị ga-esonye na ngalaba ndị na-ege ntị. Ma bụ na mgbe a na-ezigara akwụkwọ, ọ naghị erute "ìgwè mmadụ ọ bụla", kama ọ bụ naanị ndị nwere mmasị n'ezie. Iji mee nke a, ha na-enyocha ndị ọrụ ma mụọ ụdị ọdịnaya ha na-enyochakarị na ọnwa ndị na-adịbeghị anya iji nye ha ụdị ọdịnaya ahụ. Ma ọ bụ na ha nwere algọridim nwere mgbanwe 30 ka ha nwee ike ịnye ndị ọrụ ọdịnaya kachasị mma na, n'otu oge ahụ, ha na-enye ụlọ ọrụ ngwá ọrụ dị irè ebe ọ na-eru ndị na-ege ha ntị.
N'ikpeazụ, uru ọzọ nke ikpo okwu ndị ọzọ na-enweghị bụ ikike igosipụta ọnụ ọgụgụ, kamakwa ịgbanwe ndụmọdụ n'etiti blọọgụ.
Otu esi eji Outbrain
Iji malite iji Outbrain ihe mbụ ị ga-eme Ịkwesịrị ịbanye na ebe nrụọrụ weebụ ha wee debanye aha akaụntụ iji jiri ya. Buru n'uche na Outbrain nwere ọtụtụ nhọrọ, mana ọ nwere ụdị efu yana ụdị akwụ ụgwọ ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị na-eji nke efu, ị nwere ike ịnwale ma ọ bụ ihe ị na-achọ.
Ozugbo ị jikọọ, ị nwere ike ịdebanye aha blọọgụ ma ọ bụ ibe gị. Iji mee nke a, ị ga-aga na nhọrọ "Tinye blọgụ". N'ebe a, ị ga-ekpebi ma ị tinyela wijetị ikpo okwu, họrọ ikpo okwu gị (ya bụ, ebe a na-akwado ya ma ọ bụ ihe CMS ị nwere blọgụ gị), url, asụsụ, na ụdị nkwanye (nke kacha mma). dị ka thumbnail, ebe ọ bụ ihe a na-ahụ anya). Ọ dị mkpa ka ị wụnye wijetị a na blọọgụ ma ọ bụ ibe gị ka o wee rụọ ọrụ nke ọma ma ọ bụ, ọ bụrụ na ọ bụghị, ọ ga-enye njehie.
Ozugbo ịmechara ihe niile, ma nabata usoro na ọnọdụ nke ọrụ ahụ, naanị ị ga-pịa bọtịnụ na-aga n'ihu.
Mgbe usoro a gasịrị, naanị ihe ga-eme bụ ịga na ngalaba nhazi nke ibe gị, wee lelee na wijetị ahụ na-arụ ọrụ. Nke a ga-ekwe ka ikpo okwu na-achọpụta ọdịnaya ọhụrụ mgbe niile ma nwee ike igosipụta ya. Ma kpachara anya N'ihi na n'otu oge ahụ ị na-ahapụ ya ka ọ kesaa ọdịnaya gị, ị ga-aghọkwa akpa ebe ị ga-enweta ọdịnaya site na ndị ọzọ.
Enwere ike gbanwee nke a, na-abanye na mpụga, na ngalaba Jikwaa blọọgụ / ntọala, ị nwere ike hazie ya ka ọ jikọta saịtị gị na ndị ọzọ metụtara ya, ka ọ na-ejikọta saịtị gị naanị ma ọ bụ ka ọ ghara igosi ndụmọdụ. Ihe ọ bụla ị kpebiri, ị ga-pịa Chekwa ntọala ka e dekọọ ya.
Otu esi eme nke ọma n'elu ikpo okwu
Ọ bụrụ na ị kpebie ịnwale ya, ọ bụrụ na ịchọrọ n'ezie ka ọ nwee ihe ịga nke ọma na ya, ọ dị mkpa ka ị mara ka ị ga-esi dọta ndị na-ege ntị ị na-achọ na ha na-eso gị. Nke a, nke dị ka ọ dị mfe, ọ bụghị n'ezie. Ya mere, n'ime ndụmọdụ anyị nwere ike inye gị, bụ:
Tọọ ihe mgbaru ọsọ. Ụfọdụ ndị ezi uche dị na ya ka mgbasa ozi gị nwee ihe ịga nke ọma ị na-achọ. Dabere na ebumnuche ndị ahụ bụ na ị ga-ahọrọ ọdịnaya. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịkọrọ akụkọ gbasara ndị agadi na ndị na-ege gị ntị bụ ndị na-eto eto, ọ gaghị enwe isi.
Kpebie ndị na-ege gị ntị bụ. Nke a dị mkpa ịkọwapụta na-eburu n'uche n'ozuzu. Ya bụ, n'ime ibe gị dum, ònye bụ ndị na-ege ntị lekwasịrị anya? Na dabere na ọdịnaya ahụ ịkekọrịta, onye ga-abụ? N'ụzọ dị otu a, ị ga-enwe ike ịkechapụ oke mpaghara, ụdị ngwaọrụ, afọ, wdg.
Họrọ ọdịnaya gị. N'iburu n'uche ihe niile dị n'elu. Ọ bụrụ na ịhọrọ ezighi ezi, mkpọsa gị agaghị aba uru. Otu ndụmọdụ anyị na-enye bụ ka ị ghara ịhapụ ederede ị na-etinye obere ihe, ma ọ bụ foto ahụ. Ihe abụọ a bụ ihe nwere ike ịdọta ndị na-agụ akwụkwọ ya mere ọ bụ ihe amamihe dị na ya iwepụta oge iji họrọ ndị kacha mma.
Sochie. Ọ dịkwa mkpa ịṅa ntị na nkọwapụta tupu ịmalite mgbasa ozi gị ka ọ dị mgbe emechara, iji chọpụta ma ị mere nke ọma, ọ bụrụ na ị mejọrọ, wdg. wee nwee ike mezie ihe niile.
Ngwá ọrụ n'onwe ya na-ewe ntakịrị oge iji nweta nsonaazụ, yabụ na ọ baghị uru ịnwale ule na ọ bụ ya. Ọ kacha mma ịgbalị ịnye ya ohere na-agafeghị oke iji hụ ọganihu na ọ bụrụ na ọ bụ n'ezie ngwá ọrụ ị na-achọ.
Ị maara Ọpụpụ mbụ? Kedu ihe ị chere banyere ya? Ị ga-eji ya?
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » Ahịa ahia » Outbrain: kedu ihe ọ bụ